TuSimple က အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်မယ့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဝင်ငွေအများစုကတော့ AFN ကနေ - Pandaily
Categories: Industry ကိုXiaodan Xi ဧပြီ 9, 2021 ဧပြီ 9, 2021 မှာ Posted
Automatic Drive Truck ကုမၸဏီ TuSimple က အရင္ကလည္း Securities Trade Commission (SEC) ကို အဂၤါေန႔မွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ရွယ္ယာစာရင္းထဲမွာ Nasdaqdaq မွာ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ စေတာ့ရွယ္ယာ ကုတ္နံပါတ္ “TSP ” ကို ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ရွယ္ယာတစ္စု လွ်င္ ၃၅ ေဒၚလာမွ ၃၉ ေဒၚလာေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ရွယ္ယာတစ္စု လွ်င္ ၃၄ သိန္းခန္႔၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ၁၃ သိန္းခန္႔ရွိသည္။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး IPO ကို အောင်မြင်မယ်ဆိုရင် အလိုအလျောက် မောင်းနှင်နိုင်မယ့် နယ်ပယ်ပါ။
Morgan Danley, Cross Group နဲ့ Morgan Big တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ေမာ္ဂန္ကေတာ့ ေရာင္းသူအတြက္ အဓိကေရာင္းသူလို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။
ဆန်တီယာဂိုအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်က တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တစုက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရရှိထားသည်။ သို႔ေသာ္ ၎၏ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အေမရိကန္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကို ဆက္တိုက္ရယူကာ Volkswagen ကားကုမၸဏီပိုင္ Heavy Traton Group, Navita Division, Cargo Special and Cargo ကုမၸဏီ U.S.Xpress တို႔ပါ၀င္သည္။
Topics: မြင်ကွင်းAutonomous Truck Company TuSimple က တစ်ပတ်ကို UPS ထက် နှစ်ဆတိုးပြီး
IPO ၏ မွတ္တမ္းမ်ား အရ ကုမၸဏီ၏ အဓိက ရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး Sun Dream Inc က ရွယ္ယာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းရွယ္ယာမ်ားကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (CFIUS) က အာ႐ုံစိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ Sun Dream & China Sina Corp ရဲ. အေၾကာင္းကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။
IPO ၏ ရှေ့ပြေးအမှုဆောင်၊ Dong Divisor ၏ ရှယ်ယာ အချိုးအစားသည် ၃၉.၅၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး အခြားသော အင်စတီကျူးရှင်း A ၏ ရှယ်ယာ အချိုးအစားမှာ ၃၃.၇၈ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ ကုမဏီရဲ့ စီအီးအို Chen Mamer က ရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု အချိုးအစားဟာ ၉.၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ IPO ၏ အမႈေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအားလံုးသည္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအေရအတြက္တူညီေနၿပီး ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်ဳိးအစားကိုမူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေပ။ B share ကို Chen Mammer and Martdi က ပိုင်ဆိုင်ပြီး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းစီပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
သမိုင်းကြောင်းအရ TuSimple ဟာ အရှုံးပေါ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ ရှယ်ယာသတ်မှတ်ချက်အရ S-1 ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စုစုပေါင်း ဆုံးရှုံးမှု ၄.၀၅၂ သန်းရှိပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အသားတင် အရှုံးပေါ်သူ ၁.၇၇၉ သန်းသာ ရှိခဲ့သည်။ အဓိက,ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းကို ေလ့လာၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။ ၂၀၁၈ – ၂၀၂၀ အထိ သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးစရိတ်များ (ဝန်ထမ်းစရိတ်နှင့် စက်ကိရိယာစရိတ်များ) အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၃၂၂၇.၈ သန်း၊ ၆၃၆.၁.၉ သန်းနှင့် ၁၃၂ သန်း အသီးသီး ရရှိကြသည်။
အကျိုးရလဒ်ကောင်းများ ပြန်လည်ရရှိမည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် TuSimple ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ပထမဆုံးသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ကုန်စည်ကွန်ရက် (AFN) က ကိုယ်ပိုင် ထရပ္ကားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Digital Map လမ်းကြောင်းနှင့် သေနင်္ဂဗျူဟာတည်နေရာဖြစ်သည့် Terminal Ecological System အပြင် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ပိုင် အော်ပရေတာ စောင့်ကြည့်ရေး စနစ် TuSimple Connect ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် Navistar InternationalCorporation နှင့် ပူးပေါင်းပြီး တီထွင်ထားသော SAE Level4Automatic Truck, ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတိုင်မီတွင် ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် .
ဒါပေမဲ့ ကုမဏီဟာ အနာဂတ်မှာ ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုမိုပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အတွက် OEM နဲ့ လက်တွဲကာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ခြင်းတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ L4 ကိုယ်ပိုင်ထရပ်ကားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ AFN လုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ခဲ့ပါတယ်။
TuSimple သည္ မိ႐ိုးဖလာ ကုန္တင္ကုန္ခ်ကုမၸဏီအျဖစ္ အျမတ္အစြန္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရရွိထားၿပီး Booking လုပ္ကာ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ကုန္တင္ ယာဥ္အသင္းမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူသူႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ IPO အေနနဲ႔ အလားအလာရွိတဲ့ ဘ႑ာေငြဟာ ၈ ဒသမ ၁၀ သန္း၊ ၾကားကာလအတြက္ သန္း ၅၀ ကေန သန္း ၇၀ အထိ ရွိပါတယ္။